Khabar Break - यी हुन् डोनाल्ड ट्रम्पकी श्रीमती मेलियाना, जसको नग्‍न फोटो अहिले चर्चामा छ
Monday 23rd of October 2017, 6:57:43 pm
यी हुन् डोनाल्ड ट्रम्पकी श्रीमती मेलियाना, जसको नग्‍न फोटो अहिले चर्चामा छ
राेचक Published On: Saturday 10th of December 2016, 07:22 PM
१५ वर्षअघि डोनाल्ड ट्रम्पकी तत्कालीन प्रेमिका मेलियायाना कानुसले बेलायतको जिक्यू म्यागेजिनका लागि नग्न फोटो सुट गरेकी थिइन्। ट्रम्पको जेट प्लेनमा यी फोटोहरु खिचिएको थियो। यस तस्विरमा उनले चेन र हिरा लगाएकी छिन्। पेस्तोल बोकेकी छिन्। अमेरिकी राष्ट्रपति पदमा ट्रम्पको विजयसँगै मेलिना अमेरिकाको फस्ट लेडी बनेकी छिन्। अहिले चर्चा उनको छ। उनका नग्न फोटोको छ। जिक्यूका सम्पादक डायलनलाई यसै वर्षको सुरुआतमा द हलिउड रिपोर्टरले यस घटनाका विषयमा प्रश्‍न राखेको थियो। जवाफमा जोन्सले भनेका थिए,ुत्यतिबेला जिक्यूमा फोटो खिचाउन उनी निकै आतूर थिइन्। डोनाल्ड ट्रम्प पनि यी फोटो हेर्न निकै आतूर थिए।
उनले आफ्नो कार्यालयमा फोटो पठाइदिन आग्रह गरे। हामीले यस फोटोलाई कभरमा प्रकाशित गर्‍यौं। केही फोटोका प्रिन्ट डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यालयमा पठाइदियौं।ु यस्तो थियो जनवरी २००० को बेलायती संस्करणमा जिक्यूले नग्न तस्विर समावेश गरेर लेखेको समाचार स् के स्टाइलिस जेट(सिट चाहिन्छ रु चाहिने भए सेक्स,स्टायल र १८ क्यारेटको सुनका सिल्ट बेल्ट महत्वपूर्ण छन्। सुपर मोडल मेलियाना १४ पृष्ठको हाई लिभिङका लागि लन्च प्याड हुन्। ३० हजार फिटमाथि यात्रा गरिरहदाँ तपाईले कहिल्यै अर्को व्यक्तिसँग समिप्यमा आउने कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ रु तपाईको यो कल्पना अब भर्जिन एटलान्टिकमा पुरा हुनसक्छ। यहाँ अपर क्लास प्यासेन्जरलाई डबल बेडको व्ववस्था छ। यदी तपाई यस्तो यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले जेट(सिटमा यात्रा गर्नुपर्छ। यसका केही नियम छन्।
किन हुन्छ योनि बाहिरी छाला कालो? कारण यस्तो छ
शरीरमा मुसा आएर हैरान हुनुहुन्छ ? चिन्ता छोड्नुस्, यसो गर्नुस् केहि दिनमै मुसा गायब
भुलेर पनि यी वस्तुहरु नराख्नुहोस पर्जमा ! कंगाल बनाउछ !
यि राशिको एकअर्कासँग विवहा भयो भने टिक्न मुस्किल
एक यस्ती सुन्दरी, जसले मृत्युदण्ड दिँदा गोली हान्ने सैनिकलाई फ्लाईङ कीस दिइन !